ब्लग - साहित्य/ Blog
- Jun 28 2016
Similar/Related News - Adaptive Image Quality-Panchanga - Tarkari Bazar -
Aakar Anil - Jun 29 2016
हाम्रो पात्रोको नयाँ संस्करण
नयाँ सुबिधा सहितको 'हाम्रो पात्रो'को ताजा विशेषताहरू: १) सम्बन्धित समाचार - २) तस्बिर अनुकूलता ३) पञ्चाङ्ग - सूर्योदय , सूर्यास्त, चन्द्रोदय, चन्द्र अस्त, नेपाल सम्बत सहितको पूर्ण पञ्चाङ्ग ४) तरकारी बजार ५) लोड-सेडिंग - अब दैनिक विजेटमा पनि - साथै समय अड्किने समस्याको समाधान गरिएको छ
डीभी लोट्टरी को नतिजा प्रकाशन
नेपाली समय अनुसार अहिले भर्खरै डाइभर्सिटी भिसा(डिभी) २०१७ को नतिजा प्रकाशन भएको छ ।
अब Navyaata म्यागेजिन Hamro Patro तथा Hamro News & Magazine मा
दरबारमार्ग, काठ्माण्डौं – चैत्र ८, २०७२ | नेपालको सर्वाधिक सफल फैशन तथा लाइफ स्टाइल म्यागेजिन NAVYAATA को सातौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा डिजिटल मेडियाको क्षेत्रमा नयाँ साझेदारीका साथ आफ्नो उपस्थिती देखाएको छ ।
२०७३ सालको दशैं तिहार कहिले ?
यो बर्ष (२०७३) को दशैं आश्विन १५ गते घटस्थापना, २२ गते फूलपाती, २३ गते महाष्टमी, २४ गते महानवमी र २५ गते बिजयादशमी परेको छ ....
त्यसैले कुनै आत्माको रोजाईमा “नवराजको जन्मोत्सव” पर्नु मेरो शौभाग्य हो । यसकारण मेरो लागि त्यो “दिव्य आत्मा” हो । फागुन ११ गते अनि ‘नवराज’ को व्यक्तित्वले एक साथ कसैको मनमा महत्वपूर्ण स्थान पाउनु भनेको ‘नवराज’ का लागि विराट महत्व वोकेको विषय हो । किनभने उ एउटा सानो घेराका सिमित श्रोताको सँसार भएको व्यक्ति हो ।
Radio playback issue in Hamro Patro for iPhone and iPad
We are happy to inform that we have updated our iOS app with load shedding schedule and better news reader. Load shedding was the number one feature that our user requested. And, we are proud to have it included in our iOS app...
नाकाबन्दी, भारतको गुलाम मानसिकता र अनौठा हामीः लिलाराज खतिवडा
सेक्स, पावर र पैसाकै वरिपरि जिन्दगीका चक्काहरु घिस्रिन्छन् । यिनको पुनरुक्तिक प्रयोग वा प्राक्टिसले थाहै नपाइ एडिक्शन बढाउँछ अनि झगडा शुरु हुन्छ । युद्द जारी हुन्छ । आततायी बढ्छ । अनि हिंशाको एडिक्शन, युद्दको एडिक्शन । मान्छे कै रगत चुस्ने एडिक्शन । मनोवैज्ञानिकहरुका अनुसार एडिक्शन दुइ तरिकाले बिस्तार हुन्छ । परपिडक र स्वपिडक । राजनीतिक नेता, ब्यापारी वा पूँजीपतिहरु परपिडक हुन् भने, धार्मिक वा आध्यात्मिक सन्यासी, जोगी, पादरी आदि चाहिँ स्वपिडक ।
गोवर्द्धन पूजा/म्ह: पूजा/नेपाल सम्बत्
तिहारको चौथो दिन अर्थात गोबर्धन पूजा । यस दिन खेतबारी जोतेर र गाढा तानेर किसानलाई सहयोग गर्ने गोरुको पूजा गरिन्छ । त्यसैले यस दिनलाई हल तिहार पनि भनिन्छ । जोत्ने गोरु र बाच्छालाई माला लगाइन्छ । चामलको पिठोमा रंग मिसाएर रंगिचंगी छाप बनाइ तिनको शरीरमा लगाइन्छ । तिनलाई पूजा गरेरी मिठो खाने कुरा खुवाइन्छ ।त्यस्तै गोबरलाई गोबर्धन पर्वतको प्रतीक मानेर गोबर्धन पर्वतको पूजा गरिन्छ ।
नेपालीहरूको दशैंपछिको अर्को महत्वपूर्ण चाड तिहारको आज अन्तिम दिन अर्थात भाइटिका । दीप प्रज्वलन गरेर झिलिमिली पार्दै मनाइने भएकाले दीपावली पनि भनिने यस चाडको पाचौं दिन दिदीबहिनीको हातबाट दाजुभाइले टिका लगाउछ्न।
आज तिहारको दोस्रो दिन- कुकुर तिहार । आज कुकुरलाई मिठो खानेकुरा दिएरमाला लगाईदिने र पूजा गर्ने गरिन्छ । कुकुर स्वामीभक्त र इमान्दार प्राणी भएकाले यसको आज सवैले पूजा गरेका हुन् । कुकुरले आफु आश्रय लिएको घरको सँधै देखभाल र खासगरी रात्री समयमा सचेततापूर्वक सूरक्षा प्रदान गर्दछ ।
तिहारको तेस्रो दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर लक्ष्मीपूजा मनाईंन्छ । घरमा अन्न धेरै आओस् भनेर लक्ष्मीको पूजा गरिएको विश्वास छ । घरघरमा लक्ष्मी भित्र्याउन घरको आँगनदेखि लक्ष्मी स्थापना गर्ने कोठासम्म रातो माटोले पोतेर लक्ष्मी हिँड्ने बाटो बनाइन्छ । त्यसमा चामलको पीठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाएर केराको सुतलामा बत्ती बाल्ने गरिन्छ । तिहार झिलिमिली बत्ती बाल्ने चाड हो । त्यसैले यस चाडलाई दीपावली पनि भनिन्छ ।
तराईबासीहरुको एक महत्वपूर्ण पर्व छठ हो। व्रतालुले स्नान गरेपछि घरमा सादा भोजन ग्रहण गरेर सूर्यको आराधना गरेपछि छठ पर्व सुरु हुन्छ। जलाशय किनार सजाएर त्यहीँ छठ मनाइन्छ। छठ खासगरी सूर्यको उपासना गर्ने पर्व हो । प्रकृतिको संरक्षक सूर्यको उपासना गर्दै ४ दिनसम्म छठ मनाइन्छ । मुख्य छठ कात्तिक शुक्ल खस्ठी तिथिमा पर्छ ।
दशैं बिशेष कार्यक्रम हाम्रो दशैं Radio Concert
Deshain Special Nepali Musical show, "Hamro Dashain - Radio Concert - 2072
नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी बडादशैंको आठौं दिन महा अष्टमी पर्व देशभर मनाईंदैछ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन पूजा कोठा, दशैं घर र मण्डपमा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरिएको ठाउँमा महा अष्टमीको दिन भक्तिपूर्वक पुजाआजा गरिन्छ । देशभरिका दशैं घरमा आज केराको पातमा चामलको नौ थुप्रा लगाएर त्यसमा जनै, सुपारी, नैवेद्य तथा भेटी राखी नवदुर्गाको पूजाआजा गरिन्छ ।
दशैंको यो वर्षको नयाँ गीतहरु
यो वर्ष पनि दशैंको लागि धेरै गीतहरु आएका छन् | ल हेर्नुस नयाँ भिडिओ
आज विजयादशमी अर्थात नवरात्रीको दशौं दिन, बडा दशैंको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन । यस दिन दुर्गा भवानी पूजाको विसर्जन गरि मान्यजनहरुबाट प्रसाद स्वरुप टिका जमरा लगाइन्छ । भगवान रामचन्द्रले बनबासका बेला दुर्गा स्वरुपा महामायाको नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेपछि महामाया देवीको कृपाले नवमीको रातमा ‘भोलीको दिन मेरो प्रसाद स्वरुप टिका जमरा लगाई रावणसंग युद्ध लडेमा विजयी हुन्छौ’ भनेर आशिर्वाद दिनुभएको थियो ।
आज फुलपाती, बडादशैंको सातौं दिन । सप्तमी तिथिमा पर्ने यस दिन हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान चाड बडादशैंको महत्वपूर्ण दिन पनि हो । घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा र फुलपातीलाई आज दशैंघरमा भित्र्याईन्छ । कालरात्री देवीको पूजा अर्चना गरिनुका साथै नेपालीका घरघरमा फुलपाती भित्र्याईन्छ ।
नवरात्री आरम्भको पहिलो दिन आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदालाई घटस्थापना भनिन्छ । हिन्दूहरूको महान चाड बडादसैंको पहिलो दिन पनि हो घटस्थापना । आजको दिन दुर्गा भवानीलाई घरघरमा स्थापना गरी जमरा राखिन्छ । काठमाडौंको हनुमान ढोकास्थित दसैं घरमा र हिन्दु धर्मावलम्बीहरुका घरमा जमरा राख्ने गरिएको छ । आजदेखि नवमीसम्म घटस्थापना स्थलमा पूजाआजा गरिन्छ । घटस्थापानापछि दशैंको चहलपहल पनि सुरु हुन्छ ।
We had been working real hard since last couple of months to bring out the best version of Hamro Patro ever. Our goal for this update is not only to makeagreat looking app but also to include the features by incorporating the suggestions and feedback received from our valued users. Hamro Patro is now more elegant, more user friendly and also works great on slow internet connection